Waxay xallisaa dhibaatada taraafikada ee Istanbul, ma aha Buundooyinka Bilaashka ah, Gaadiidka Dadweynaha oo Bilaash ah | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDhibaatada Gaadiidka ee Istanbul, Kaalmo Xor ah, Gaadiidka Gaadiidka Dadweynaha oo bilaash ah
28 / 07 / 2012 34 Istanbul, DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Dean oo ka tirsan Jaamacadda Marmara ee Farsamada Siyaasadda Dr. Recep Bozlağan wuxuu soo bandhigay xalal muhiim ah oo ku wajahan dhibaatada gaadiidka ee ay sababeen dayactirka iyo dayactirka ee laga fuliyay Fatih Sultan Mehmet Bridge.
Bozlades, halkii laga raaci lahaa isgoysyada bilaashka ah, gaadiidka dadwaynuhu waa inuu bixiyaa adeegyo bilaash ah, gaadiidka badda waa in la soo saaraa soo jiidasho, ayuu yidhi.
Dean oo ka tirsan Jaamacadda Marmara ee Farsamada Siyaasadda Dr. Recep Bozlanan, Fatih Sultan Mehmet Dhibaatooyinka taraafikada iyo xalalka loo adeegsan karo qiimeyn. Isagoo cadeynaya in Istanbul loo cambaareeyay gaadiidka wadada, Maandooriyaha Farsamada Siyaasadeed ee Jaamacadda. Dr. Recep Bozlağan ayaa yiri, qiyaastii qiyaastii 1,5 milyan qof ayaa ku wareegaya inta u dhaxaysa Anatolia iyo dhinaca Yurub. Boqollaal kun oo gawaarida ayaa badalay. Waxaa jira labo halbowlood markii aad rabto inaad ka gudubto jidka weyn. Bosphorus iyo Fatih Sultan Mehmet. Bosphorus waa biriij dhuuban oo ka kooban jidka 3 ee soo galaya, oo aadaya 3. Fatih Sultan Mehmet Bridge waxay ka kooban tahay 8. Istanbul waa magaalo aad u badan. Fatih Sultan Mehmet ayaa loo qaaday daryeel sababo farsamo. Nadiifinta wadarta 4 ee dhinaca dhinaca geeska koonfureed ee buundada ayaa la dhameeyay. Laakiin illaa iyo inta laga gaadhay dayactirka, Istanbul waxay la kulantay dhibaato weyn oo dhanka taraafikada ah. Sababta looga baxayo socodka socdaalkan waa in Istanbul si weyn loo cambaareeyay gaadiidka. Ma jirto waddo kale. Waxaad isticmaali doontaa buundooyinka ama waxaad isticmaali kartaa nidaamka ferriga u dhexeeya Sirkeci iyo Harem. Laakiin awoodda nidaamkaasi waa qaar
Isagoo ka hadlaya in gaadiidka xorta ah ee bilaashka ah ee gaadiidka dadweynaha uu xalinayo dhibaatada gaadiidka inta badan. Dr. Bozlağan ayaa sheegay, in Marka ay mid ka mid ah buundooyinka u xidhan yihiin gaadiidka, awoodda buundada ayaa hoos u dhigi doonta 2. Sidaa darteed, waxaan u baahannahay inaan hoos u dhigno baahida dadka ee buundada iyada oo loo marayo hababka gaarka ah. Waxaan u baahannahay inaanu dadweynaha u dirno nidaamka gaadiidka dadweynaha. IETT, Istanbul Otobüs A.Ş., basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay iyo metrobus, kuwaas oo rakaabka saaran labada dhinac, waa in lacag la'aan laga dhigaa. Tani waxay noqon doontaa mid xiiso u leh muwaadiniinteena. Xaqiiqada ah in buundooyinka ay yihiin bilaash waa waxqabadka wanaagsan marka laga eego helitaanka qalbiga muwaadinka. Hase yeeshee, saacadaha codsiga bilaashka ah waa in la beddelo. 25 saacad bilaash ah ma helaysid sax. Marka aad sameysid saacadda 24 bilaash ah mid ka mid ah buundada waxay u ordayaa heerka hooseeya ee 24 boqolkiiba. Laakiin markaad buundada ka dhigto, waxay dalbaneysaa buundada. Sidaa awgeed, ciriiriga gaadiidka ee ku yaal buundada ayaa kor u kacaysa. 25-8 wuxuu ka kooban yahay afargees dheer oo mitir ah. Dhibaatada ay u geysato dhaqaalaha qaranku waa mid aad u sarreeya. Isticmaalka shidaalku wuxuu kordhiyaa si aan caadi ahayn. Gawaarida la xiro. Dadku way xiranyihiin nafsaaniga. Buundooyinka waa inay bilaash u helaan saacadaha 10 laga bilaabo 22.00 fiidkii ilaa subaxdii 06.00. Cufnaantani waxay kordhin doontaa xitaa haddii aad buundada ka dhigto bilaash ah inta lagu jiro waqtiyada gaadiidka sare. Sidaa darteed, baahida loo qabo buundada ayaa loo baahan yahay in lagu jiheeyo saacado badan. Si loo xalliyo dhibaatada gaadiidka, gaadiidka dadwaynaha waa in bilaash laga dhigo saacadaha 8.
"Gaadiidka SEA SHAQOOYINKA WAXAY LAHAYDO" In la sheego baahida loo qabo in la qaato gaadiidka badda ee hore. Dr. Recep Bozlagan ayaa sii waday: shabak kale oo kale waa gaadiidka badda. Waxay leedahay qayb weyn oo gaadiidka dadwaynaha ah. Maalin kasta, boqolaal kun oo qof ayaa u safraya labada dhinac ee gaadiidka badda. Sidaa daraadeed, waxaan u baahanahay inaan ka dhigno jidka badda si aad u soo jiidasho leh. Waxaad xor u ahaan kartaa shabakada badda. IDO, khadadka magaalada, matoorada ayaa lacag la'aan u qaadan kara. Xaaladaha aan caadiga ahayn, gobolka ayaa dabooli doona khasaarahoodii dhaqaale. Sababtoo ah gobolka ayaa u taagan tan. Waxaan sidoo kale u baahan nahay inaan ka sameysno adeegyo ferry ah oo ka soo jeeda beelaha kala duwan. Waagii hore, waxaa jiray adeegyo ferry ah oo u dhexeeya Kabatas iyo Harem. Tani lama samayn sanadihii la soo dhaafay. Si kastaba ha ahaatee, Kabataş waa miisaan u habboon tan. Sidaa darteed, duulimaadyadan ayaa dib loo bilaabi karaa. Maadaama aysan jirin wax kaabayaal ku habboon Beylerbeyi, 10 waxay dhisi kartaa xayiraad, xayawaan aan lakulmaynin maalintii, iyo qabanqaabin qorshe halkaas oo dhuunta baabuurtu ku xiran karaan oo si fudud u yareeyaan rakaabkooda. Meel kale waa Baltalimanı. Iyada oo hababkaasi waxaad jiidi kartaa baabuur badan sida aad ka soo geli karto buundada. Waxaan u baahanahay inaan u gudubno maareynta xaaladaha degdegga ah. Nooca isbeddelka ayaa loo baahan yahay in la tixgeliyo ka hor bilowga dayactirka. "" 3. WAXYAABAHA WAXYAABAHA LAGU QAADO KOOXAHA IYO DHAGEYSIGA ISTANBUL Labo in labada buundo ee ku yaala Istanbul aan ku filnayn 3. Waa inaad sheegtaa in buundada ay tahay in la sameeyo. Dr. Recep Bozlağan ayaa yiri, "Gaadiidka badda ma baddalo buundada hal mar. Sababta oo ah buundada ayaa siisa marin aan kala go 'lahayn. Buundada marka la eego gaadiidka gaadiidka waa mid taxane ah. Marka aynu eegno magaalooyinka waaweyn ee adduunka, tusaale ahaan, London waxay leedahay dad ku dhow qiyaastii Istanbul. Waxay ka kooban tahay laba dhinac, sida Istanbul oo ku yaal London. Webiga Tems maaha sida webiyada aan haysano. Waa webi badan. Waxaa jira daraasado badan oo buundooyinkan ka baxa webigan. Maxaa ka dhigaya Istanbul oo ka duwan magaalooyinka kale ee waaweyn ee adduunka waa quruxda aan caadiga ahayn ee Bosphorus. Waxay leedahay qurux taariikheed oo u baahan in la ilaaliyo. Sidaa daraadeed, ma dhisi karno meel kasta oo hunguriga ah. Waxaan u baahannahay inaan eegno meesha aan ku sameyn karno buundada leh daraasado aad u fiican. Labada buundood ee hadda jira ma dabooli karaan baahida Istanbul. 3 in Istanbul. Buundada ayaa u baahan in la dhiso. Buundadani waa in sidoo kale la dhisaa qaybta waqooyi ee ugu sareysa Istanbul si ay u keeni karto dhaawaca ugu yar ee Bosphorus. Qaybta waqooyiga ee Bosphorus, kaymaha labaduba waa yar yihiin, taariikhda taariikhiina waxay ku dhowyihiin. Maaddaama ay ka fog tahay magaalada, ma jirto halis ah in buundada ay ku sii jiri doonto magaalada muddo dheer. Buundooyinka kali kuma filna. Wadooyinka gawaarida waa in la dhisi doonaa dhuunta, "ayuu yiri. "GAADIIDKA ISTANBUL WAXAA LAGA BILAABSAN KARAA BARNAAMIJYADA DEMBIYADA Boz Boedan ayaa sidoo kale qiimeeyey gaadiidka magaalooyinka ee Istanbul waxaana lagu nuuxnuuxsaday in nidaamka metro laga yareeyo dariiqyada ugu muhiimsan sababta oo ah nidaam qaali ah. Professor Dr. Bozlagan ayaa yiri: dusha sare ee magaaladaada aad ayey muhiim u tahay. Aqoonsiga ugu sarreeya ee Istanbul waa taallo taariikhi ah oo sameeya qaabka tareenka ee adag. London waa mid toos ah, siinta gaadiidka tareenka. Dhibaato maaha meel magaalada ka mid ah. Dhinaca kale, tareenka dheer ee tareenka ee Tokyo waa mid caadi ah. Sidaa daraadeed, dhulka magaalooyinkaasi waa dhul fududeynaya qaabka tareenka. Hase-yeeshee, farshaxanka ballaadhan ee Istanbul wuxuu ka dhigayaa dhismaha mitrooga. Intaa waxaa dheer, qaababka metro waa nidaam qaali ah. Annagu ma nihin sida hodan ah England. Sidaa daraadeed waxaan dhisi karnaa gawaarida wadooyinkeena ugu muhiimsan. Meelo kale, waxaan u baahannahay inaan samayno khadad si aan u quudino tareenka. Kuwani waa nidaamyo xadidan oo xadidan oo kor iyo hoosba ka socda dhulka. Waxaa sidoo kale jira nidaam garabsi u dhaxeeya labada dhinac ee laga rabo Istanbul. Isku-dhafka warshadaha ee Istanbul waa mid ku habboon baabuurka fiilooyinka. Sababtoo ah magaaladu waxay ka kooban tahay dooxooyinka iyo buuraha. Waxaad isku dari kartaa buuraha Istanbul oo leh gaariga fiilada. Dadku waxay doorbidaan wiishka. Sababtoo ah waxaa jira wax fiican oo ku saabsan baabuurta fiilooyinka. Waxaad haysataa fursad aad ku daawato aragti weyn.
Isha: waxaan beyazgazete.co
Dhibaatada gaadiidka iyo dhibaatooyinka gaadiidka ee Ismit ayaa xakamaynaya tareenada halkii ay ka heli lahaayeen tareeno
Waxay xallisaa dhibaatooyinka gaadiidka ee Istanbul, ma aha buundooyinka, mareenka
Xalliyaan dhibaatooyinka gaadiidka iyo gaadiidka ee Izmit
Dhibaatada Gaadiidka Gaadiidka ee Gaziantep Metro iyo Metrobus Solver
Taraamida ayaa xallinaysa dhibaatada gaadiidka ee Nevsehir
Wuxuu xalliyaa dhibaatada gaadiidka ee nidaamka tareenada ee Sivas
Nidaamka Tareenka wuxuu xalliyaa dhibaatooyinka gaadiidka ee Denizli
Goobta cusub ee baarkinka Bagcılar ayaa xallin doonta dhibaatada gaadiidka
Kösedağı: IETT Mas'uuliyiinta Ma Garanayo-Maqal-Dhibaato Gaadiidka Gaadiidka Dadweynaha!
Shirkadda Basaska ee Istanbul
Muxuu u yahay Metro of Izmir (3)?